Abathengisi bezenzululwazi baxoxa ngezibonelelo zophando lwegama elingundoqo le-FBA
I-Las Vegas, nge-9 kaJuni, ngo-2021 (i-Arhente yeeNdaba zeHlabathi) -Umthengisi wezenzululwazi eLas Vegas, eNevada kutshanje uxoxe ngamagama aphambili kunye nezibonelelo zophando lwegama eliphambili lokuzaliseka komthengisi weAmazon. Inkampani kutshanje ibhengeze ukumiliselwa kwegama labo eliphambili leAmazon FBA, eliyilelwe abantu abathengisa kwiA ...Funda ngokugqithisileyo »
Ngenjikalanga kaJuni 16, uloliwe wokuqala wamatye ukusuka kwizibuko lezothutho laseyinchuan ukuya kwiziko lasechongqing lisuka kwisikhululo seyinchuan semithwalo esemazantsi. Lo loliwe ukhethekileyo wamatye unezingxobo ezingama-60 zizonke, ezinobunzima beetoni ezili-1650, kwaye ixabiso limalunga ne-6.73 yezigidi zeerandi. Ukusebenza kwe ...Funda ngokugqithisileyo »
Amaxhoba okudubula e-FedEx afumana inkxaso-mali kwingxowa-mali yoluntu
I-Indianapolis-Iiveki ezintandathu zidlulile okoko indoda enompu yabulala abantu abasibhozo kwiziko lomhlaba leFedEx eIndianapolis. Ngelo xesha, uluntu lumbutho wokuxhasa amaxhoba, abasindileyo kunye neentsapho zabo, kwaye bakhulisa ngaphezulu kwe- $ 1.5 yezigidi. “Xa ezo ziganeko zisenzeka, abantu baziva bengenakuzinceda ...Funda ngokugqithisileyo »
I-DHL ikhusela ingqesho entsha yeLogicor ye-219,22 yeenyawo zeenyawo kwindawo yokugcina impahla yaseHams
I-Logicor, ekhokela umnini wezindlu nomthengisi waseYurophu, uqeshise indawo yokugcina impahla kunye nokusasaza i-219,112 kwiHams Hall Distribution Park eBirmingham, UK ukuya kwi-DHL. Inkokeli yehlabathi kumzi mveliso wezokuloba ityikitye isivumelwano sengqesho sexesha elide kwindawo leyo ukuze ihlangane nayo ...Funda ngokugqithisileyo »
Ubhubhane wesithsaba waseIndiya uhlasela ishishini lokuthumela kwihlabathi liphela
Sisebenzisa ii-cookies ngezizathu ezahlukeneyo, njengokugcina ukuthembeka kunye nokukhuseleka kwiwebhusayithi ye-FT, ukwenza umxholo kunye nokubhengeza, ukubonelela ngeempawu zosasazo lwasekuhlaleni, kunye nokuhlalutya ukusetyenziswa kwewebhusayithi yethu. Igagasi losulelo lweCovid-19 e-India lubethele ukuhanjiswa ...Funda ngokugqithisileyo »
I-LNG njengamafutha aqokelela isantya, kodwa iinqanawa ezindala zijongana namaqhuma endleleni
Ixesha lokuposa: Meyi-13-2021
Ezinye i-18.5% zezakhiwo ezitsha ezinikwe ikhontrakthi kwiinyanga ezine zokuqala zika-2021 ziyilelwe ukusebenza kwi-LNG njengamafutha ngokokuhlelwa koluntu i-DNV. UPaul Bartlett | Nge-13 kaMeyi, ngo-2021, nangona kunjalo, iinqanawa ezininzi ezindala akunakulindeleka ukuba zihlangabezane neemfuno zobungqingqwa obutsha be-IMO ezinokuthi zamkelwe kwi-MEPC ...Funda ngokugqithisileyo »
Ukuhanjiswa kwamanye amazwe kubaluleke kakhulu kwiinkampani zorhwebo lwangaphandle
Ixesha Post: Apr-15-2021
Uyifumana njani inkampani yempahla yorhwebo lwangaphandle? 1. Urhwebo lwethu lwangaphandle, kokukhona ishishini lorhwebo lwangaphandle lukhulu, kokukhona lizinzile. Okokuqala, kufuneka kubekhona inkampani yokuhambisa kunye neyokuloba yamazwe aphesheya ezinzileyo njengeTaishan. Le nkampani yokuhambisa iimpahla ayisiyonyani ...Funda ngokugqithisileyo »
Uphuhliso lwendlela yokusebenza kwamazwe aphesheya
Ngendlela yokudityaniswa kwehlabathi kunye nokwanda kwenqanaba leenkonzo, umba wokuhanjiswa kwezinto uhluke ngokupheleleyo kunangaphambili, inkqubo iya isiba nzima ngakumbi, kwaye iimfuno zabathengi ziya ziba ngqongqo ngakumbi. Ke ngoko, kwiminyaka yakutshanje, ezinye zichaza ...Funda ngokugqithisileyo »
Ukudlulisa ukuhanjiswa kwedatha kumzi mveliso omkhulu wokudibanisa idatha
Umzi mveliso wamanye amazwe ohambisa izinto zokuhamba uhambelana ngokusondeleyo namanye amashishini amakhulu, anje ngemveliso ebonakalayo kunye nomzi mveliso we-e-commerce, ngamathuba amakhulu entsebenziswano. Ngokusebenza ngokuqhubekayo kunye nohlengahlengiso lolwakhiwo lwenkonzo ngokudityaniswa, ayinakuphucula kuphela ...Funda ngokugqithisileyo »